Mon, Aug 20, 2018 | 16:56:54 NST
बेरोजगार हुनुहुन्छ? गँड्यौला पाल्नुस्!
सूर्यकुमार क्षेत्री/ उज्यालो । सुन्दा अचम्म लाग्ला गँड्यौलाको पनि खेती हुन्छ भन्दा । तर अचम्म नपर्नुस गँड्यौला खेती गरेर तपाईँ लाखौँ कमाउन सक्नुहुन्छ । नेपालमा गँड्यौला व्यवसाय गर्न थालेको त्यति धेरै भएको छैन तर यसमा लागेकाले छोटो समयमै मनग्गे आम्दानी गरिसकेका छन् । काठमाडौंका २५ बर्षिय अशोककुमार भट्टराईले बिए पास गरेपछि गँड्यौला खेती गर्नुभयो । काठमाडौंको रामकोटमा उहाँको गँड्यौला फर्म नै छ । उहाँसित अरु तीन जना साथीहरु प्नि यही पेशामा जमेका छन् । दश किलो गँड्यौलाबाट सुरु गरेको भट्टराईको फर्मम...
खुलेर यौन शिक्षा
केशव अधिकारी/ उज्यालो । धादिङ, जेठ २८ – केही वर्ष पहिलेसम्म स्वास्थ्य बिषय अन्तर्गत यौन तथा शारीरिक विकासक्रमको पढाई हुने समयमा अधिकांश छात्रा कक्षामा भेटिदैनथे । तर हिजो आज छात्रछात्राहरु यौनका बारेमा खुलेर कुराकानी गर्छन् ।
जीप दुर्घटनामा लक्ष्मण थारु सहित ९ जना घाइते
हेमराज शर्मा/ उज्यालो । दाङ, जेठ २८– दाङको सतबरीया ९ अमिलीयमा जीप दुर्घटना हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष लक्ष्मण थारु सहित ९ जना घाईते भएका छन् । आईतबार बिहान कपिलबस्तुबाट बर्दियाका लागि छुटेको भे १ च १२०८ नम्बरको निजी जीपको टायर पन्ञ्चर भएर दुर्घटना हुँदा जीपमा सवार थरुहटका लक्ष्मण थारु, मिनराज चौधरी र गंगाधर चौधरी गम्भीर घाईते हुनुभएको छ ।
काठ तस्करीमा सामुदायिक बनकै अध्यक्ष संलग्न
सोम सुनुवार/ उज्यालो । इलाम, जेठ २८– दक्षिणी इलामको इभाङ्ग ७ र ८ को बीचमा पर्ने तितिरबोटे सामुदायिक बनबाट सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीले अन्दाजी साढे पाँच लाख मूल्य पर्ने तीनसय पाँच क्युविक फुट सालको अबैध गोलिया बरामद गरेको छ ।
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक घाईते, एकजना नदीमा बेपत्ता
जुम्ला जेठ २८ – जुम्लाको तिलानदीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजना घाइते र एक बेपत्ता भएका छन् । जुम्लाको रारालिही गाविसबाट सदरमुकाम आउँदै गरेको भे १ प ८१२८ नम्बरको मोटरसाईकल कुडारी ३ मा रहेको तिला नदिमा शनिबार राती दुर्घटनामा परेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखकै अगाडी छुरा प्रहार
दमन राई/ उज्यालो । खोटाङ, जेठ २७ – खोटाङमा छुरा प्रहारबाट तीन युवा घाइते भएका छन् । सदरमुकाम दिक्तेलको माटिकोरे खेलमैदानमा भएको जिल्ला स्तरिय साकेला सिली प्रदर्शनीमा दोर्पाचिउरीडाडा १ का भुपाल राईको छुरा प्रहारबाट तीन युवा घाइते भएका हुन् ।
पानी माग्दै भजन किर्तन र पुजापाठ
एलबी थापा/उज्यालो । प्यूठान, जेठ २७ - लामो दिनदेखिको खडेरीले पानी नपरेपछि प्यूठानमा पानीको माग्दै शनिवार भगवति मन्दिरमा पुजापाठ र भजनकिर्तन गरिएको छ । जेठ महिनाको अन्तिम साता बित्नै लाग्दापनि खडेरीले पानी नपरेपछि चण्डि दल गण प्यूठान, सदरमुकामका नेवार समुदाय, स्थानीयवासी, प्रहरी लगायतले जिल्लामा रुद्रि, पुजापाठ र भजनकिर्तन गरेका हुन् ।
भुईंचालोले ३ घरमा क्षति
पोखरा, जेठ २७ - कास्कीको थुमाकोडाँडा गाविस केन्द्र विन्दु हुनेगरि दिउँसो गएको भुइँचालोले लेखनाथ नगरपालिकामा तीनवटा भवनमा क्षति पुगेको छ । भुइँचालोले लेखनाथ नगरपालिका वडा नम्वर १० तालबेंशीमा राधाकृष्ण सुवेदीको दुईतले घरको गाह्रो भत्काएको छ । यस्तै शिवराज सुवेदीको एकतले घर र ईलाका प्रहरी कार्यालय हंसपुर कार्यालयको भवनको गाह्रो भत्काएको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ । भुइँचालोका कारण मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घट्ना भने नभएको प्रहरीले वताएको छ । दिउ&ldqu...
आफ्नै साथीलाई गोली हान्ने अखिलका २ कार्यकर्ता निष्कशित
काठमाडौं, जेठ २७ - अनेरास्ववियूले अमृत साइन्स क्याम्पस इकाइ उपाध्यक्ष वसन्त शाहीलाई गोली हान्ने २ जनालाई संगठनबाट निष्काशित गरेको छ । अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य तथा अस्कलका स्ववियु उपसभापति वीरबहादुर राउत र क्याम्पस कमिटिका सदस्य मुकेश नेपाली शाहीलाई गोली हान्ने काममा संलग्न रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको भन्दै अखिलले प्रहरीको छानविन सहयोग गर्न २ जनालाई संगठनको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशित गरेको जनाएको छ ।
चौधरी ग्रुपद्वारा नवलपरासीमा बोरिङ निर्माण
नवलपरासी, जेठ २७– नवलपरासी दिब्यपुरीका बासिन्दाका लागि चौधरी गु्रप (सिजी)ले खानेपानीका लागि बोरिङ्ग बनाई दिएको छ । स्थानीय बासिन्दालाई खानेपानीको अभाव भएपछि स्थानीय बासिन्दाकै माग अनुसार दिब्यपुरीको एक र सात वडामा पानी खुवाउन चौधरी ग्रुपले बोरिङ्ग बनाएको हो ।
पश्चिम नेपालमा भुइँचालो
काठमाडौ, जेठ २७– पोखरा आसपासमा शनिवार दिउँसो भुइँचालो गएको छ । दिउँसो पौने १ बजेर ३९ मिनेटको समयमा पोखराभन्दा १३ किलोमिटर उत्तर पूर्वी ठाउँमा केन्द्रविन्दु बनाएर ४ दशमलब ८ रेक्टर स्केलको भुइँचालो गएको अमेरिकी भुगर्भ सर्वेक्षण बिभागले जनाएको छ ।
चिर्पटले हिर्काएर हजुरबुबाको हत्या
बाग्लुङ, जेठ २७ – बागलुङको पश्चिम तमान गाविसमा शनिवार नातिले हजुरबुबाको हत्या गरेका छन् । वडा नम्बर ६ का २१ बर्षिय रुपबहादुर कामीले आफ्नै ७५ बर्षिय हजुरबुबा भरमान कामीलाई दाउराको चिर्पटले हिर्काएर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मोरङमा सवारी दुर्घटनामा दुईजनाको ज्यान गयो
सुनसरी, जेठ २७ – मोरङ्गमा भएका सवारी दुर्घटनामा दुईजनाको ज्यान गएको छ । कोशी राजमार्ग अन्तरगत मोरङ्गको टंकिसिनबारीमा शनिवार बिहान इटहरी आउँदै गरेको को ८ प ५३९९ नंबरको मोटरसाईकल अनियन्त्रित भएर पल्टँदा सुनसरीको औरावनी २ का भँगडु चौधरीको ज्यान गएको छ ।
खैरो हेरोइन सहित दुईजना पक्राउ
हेटौडा, जेठ २७– मकवानपुरको चुरियामाई रातोमाटेमा शुक्रवार राती लागुऔषध खैरो हेरोइन सहित दुईजनालाई प्रहरीले पक्रेको छ । बिरगन्जबाट काठमाडौतर्फ जाँदै गरेको ना १ ज १७२२ नंबरको माईक्रोबसमा एक सय ग्राम खैरो हेरोइन लिएर आउने बारा निजगढका २१ बर्षिय मनोज परियार र काठमाडौका २२ बर्षिय राजेश कार्की चेकजाँचका क्रममा पक्राउ परेका हुन् ।
माग अनुसारको रगत पुगेन
काठमाडौ, जेठ २७– संकलन बढ्न नसक्दा रक्तसन्चार केन्द्रले माग अनुसार रगतको वितरण गर्न सकेको छैन । माग ५ सय युनिटको हाराहारीमा भएपनि केन्द्रले दैनिक ३ देखि ४ सय युनिट सम्म मात्रै रगत आपूर्ति गर्न सकेको छ ।
संरक्षण नहुँदा बहुमुल्य जडिबुटी नष्ट
धादिङ, जेठ २७– धादिङको उत्तरीभेगको सबैभन्दा विकटमा पर्ने तिप्लिङ गाउँ बिकास समितिमा बिभिन्न प्रकारका जडिबुटीहरु फेला परेपनि उचित संरक्षण हुन नसक्दा त्यतिकै खेर गएको छ ।
ढिस्को खसेर मस्र्याङ्दी थुनियो
आश गुरुङ/उज्यालो । लमजुङ, जेठ २७ – मनाङको सिरानतालमा मस्र्याङ्दी नदी थुनिँदा स्थानीय वासिन्दालाई आवतजावतमा समस्या परेको छ । ढुंगा, माटो र चट्टानले बनेको ढिस्को खसेपछि एक हप्तादेखि मस्र्याङ्दी नदी थुनिएको छ ।
दलितकी छोरी विवाह गरेका कारण दलित युवालाई गाउँ निकाला
सल्यान, जेठ २६ – सल्यानका एक दलित युवालाई दलितकै छोरी विवाह गरेका कारण गाउँ निकाला गरिएकोे छ । चाँदेकरेञ्जी गाविसका सन्दिप विकले निर्मला परियारलाई प्रेम विवाह गरेपछि आफु भन्दा तल्लोजातकी केटीलाई विवाह गरेको भन्दै परिवार र आफन्तले उनीहरुलाई गाउँ निकाला गरेका हुन् ।
पौडी खेल्न गएका ४ जना बालक सुनकोशीमा बेपत्ता
रामेछाप, जेठ २६ – रामेछाप र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने सुनकोशी नदीमा पौडी खेल्न गएका ४ जना बालक बेपत्ता भएका छन । पौडी खेल्न गएका रामेछाप भिरपानीका ४ जना बालक नदीले बगाएर बेपत्ता भएक हुन् ।
मानसिक सन्तुलन गुमाएका भान्जको कुटाइबाट मामाको मत्यु
आदर्श के.सी./ उज्यालो । रुकुम, जेठ २६ – आफ्नै भान्जको कुटाइबाट रुकुमको सिम्लीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । भान्जा खले कामीले मामा ३२ बर्षिय सार्के कामीलाई बिहान घरमै ढुङ्गा प्रहार गरि हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमका प्रमुख डिएसपी किसनहि थापाले जानकारी दिनुभयो ।
बिस्थापित माझीलाई असारभित्र पुर्नस्थापित गरिने
दिल शिरीष/उज्यालो । बाग्लुङ, जेठ २६– पोखरा–बाग्लुङ राजमार्ग निर्माणका क्रममा विस्थापित भएका माझी परिवारलाई असार मसान्तभित्र पुर्नस्थापित गरिने भएको छ । विस्थापित भएको २२ वर्षपछि माझी परिवारलाई स्थानीय राजनीतिक दल, जिविस र बाग्लुङ नगरपालिकाको पहलमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुर्नस्थापित गर्न लागिएको बाग्लुङ नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत यदुनाथ पौडेलले बताउनुभयो ।
गोली काण्डमा संलग्नको आशंकामा पाँच जना पक्राउ
काठमाडौ, जेठ २६– काठमाडौको नयाँ बजारमा शुक्रवार विहान भएको गोली काण्डमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले पाँच जनालाई पक्रेको छ । अनेरास्ववियू अमृत साईन्स क्याम्पसका उपाध्यक्ष बसन्त शाही माथि गोली प्रहार भएपछि प्रहरीले अनेरास्ववियूका कार्यकर्ता एवं अमृत साईन्स क्याम्पसका स्ववियू उपसभापति विरु रावत, मुकेश नेपाली सहित पाँच जनालाई पक्रेको हो ।
विद्यार्थी नै नभएको विद्यालय
भक्तपुर, जेठ २६– भक्तपुरको चित्तपोल गाबिस वडा नम्बर ७ भंगालमा रहेको भगवती प्राथमिक विद्यालय बिद्यार्थी नभए पछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक लगायतका गतिविधीमा व्यस्त भएको र व्यबस्थापन समितिले पनि चासो नदिएपछि पढाईको स्तर बढ्न नसक्दा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।
हात्ती माहुतेको तालिम शुरु
चितवन, जेठ २६– हात्ती माहुतेका लागि चितवनको सौराहामा पाँच दिने तालिम शुरु भएको छ । शुक्रवारदेखि शुरु भएको तालिममा लोकसेवा आयोगबाट हात्ती माहुतेको परीक्षा पास गरेर सेवा प्रवेश गरेका ३६ जना माहुतेहरु सहभागी छन् ।
अबैध काठ सहित वनका अध्यक्ष पक्राउ
धादिङ, जेठ २६ – वन संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिनै धादिङमा काठ चोरी निकासीमा लागेको पाइएको छ । धादिङको आदमघाट नजिकैबाट शशस्त्र प्रहरीले विहीवार राती सामुदायिक बनका अध्यक्ष सहित ७ जनालाई चोरीको काठ सहित पक्रेको छ ।
पहिरोले पुरिएर ७ जना नेपालीभाषीको ज्यान गयो
जेठ २६– भारतको सिक्किममा पहिरोमा पुरिएर ७ जना नेपाली भाषीको ज्यान गएको छ । पूर्वी सिक्किमको रोलेप गाउँमा बिहीबार राती अविरल वर्षा पछि पहिरो जाँदा एकै परिवारका ४ जना सहित ७ जनाको ज्यान गएको हो । दुई बालबालिका सहित ४ जना घाईते छन् ।
नेताहरु चढेको गाडी दुर्घटना
नेपालगञ्ज, जेठ २६– बाँकेका प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताहरु चढेको गाडी दुर्घटनामा परेको छ । जिल्ला विकास समितिको योजनाहरु निरीक्षण गर्न खजूरा जाँदै गरेका नेताहरु चढेको गाडीलाई नेपालगञ्जबाट २ किलोमिटर टाढा नन्दनी सिमल नजिकै यात्रुबसले ठक्कर दिएको हो ।
भीरबाट लडेर ज्यान गयो
प्यूठान, जेठ २६ – प्यूठानको लिवाङमा भीरबाट लडेर शुक्रवार बिहान एक युवतीको ज्यान गएको छ । घर नजिकै घाँस काट्न गएकी लिवाङ २ की १८ वर्षिया सीता पुनको लडेर ज्यान गएको हो ।
प्रधानाध्यापक कुटपीटको विरोधमा सबै विद्यालय बन्द
लमजुङ, जेठ २६– लमजुङको भुजुङमा रहेको त्रिभुवन विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यपकमाथि भएको कुटपीटको विरोधमा शुक्रवार लमजुङका सबै विद्यालय बन्द गरिएको छ । बुधवार राती प्रधानाध्यापक खेमराज खतिवडालाई आक्रमण गरेर गम्भीर घाइते बनाएको विरोधमा शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले पठनपाठन बन्द गराएका हुन् ।
ट्याक्टर दुर्घटनामा एकको ज्यान गयो, तीन घाइते
दाङ, जेठ २६ – दाङमा बिहीबार राती ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । ३ जना घाईते भएका छन् । पश्चिम दाङको श्रीगाउँवाट तुलसीपुरका लागि छुटेको लु १ त ७३० नम्वरको ट्याक्टर श्रीगाउँ १ वागर खोलामा पल्टिदा पवननगर ५ का २० वर्षिय आशाराम चौधरीको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ ।
काठमाडौमा गोली चल्यो
काठमाडौ, जेठ २६– काठमाडौको सोरखुट्टे नयाँबजारमा शुक्रवार विहान गोली चलेको छ । गोली लागेर एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अमृत साइन्स क्याम्पसका इकाई उपाध्यक्ष वसन्त शाही घाइते हुनुभएको छ ।
काठमाडौमा सडक विस्तार रोकियो
काठमाडौ, जेठ २६– काठमाडौ उपत्यकामा सडक विस्तारको काम रोकिएको छ । सडक विस्तारको अगुवाई गर्दै आएको नगर विकासलाई विघटन गरी सरकारले शहरी विकास प्राधिकरणलाई अस्तित्वमा ल्याए लगत्तै सडक विस्तारको काम रोकिएको हो ।
सुकुम्बासी र गरिबका लागि घर बनाउन शुरु
काठमाडौ, जेठ २६– काठमाडौमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्ग र सुकुम्बासीको लागि सरकारले आवास बनाउने काम शुरु गरेको छ । सहरका गरिब परिवारका लागि क्रमिक रूपमा आवासको व्यवस्था मिलाउने सरकारको नीतिअनुरूप निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
न्यायका लागि मैनाली परिवारको १५ वर्षे लडाईँ (भिडियो सहित)
काठमाडौं, जेठ २५ – बलात्कार र हत्या आरोपमा १५ वर्ष देखि जापानी जेलमा रहेका ईलामका गोविन्दप्रसाद मैनाली जेलमुक्त हुनुभएको छ । एक जना जापानी महिलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा आजिवन काराबासको सजाय पाएका मैनाली निर्दोष ठहर हुँदै १५ वर्षपछि रिहा हुनुभएको हो ।
अपरिचित व्यक्तिको कुटाईबाट हेडसर घाइते
लमजुङ्ग, जेठ २५ - नचिनेका मान्छको कुटपिटबाट लमजुङमा एक प्रधानाध्यापक गम्भीर घाईते भएका छन् । लमजुङको भुजुङमा रहेको त्रिभुवन विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खेमराज खतिवडालाई नचिनेका मान्छेको समूहले आक्रमण गरेको हो । विद्यालयको छात्रावासमा सुतिरहेका खतिवडालाई ढोका फोरेर आएको ४–५ जनाको समुहले राती आक्रमण गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।
न्यायाधीश बमको हत्याराको स्केच सार्वजनिक
काठमाडौं, जेठ २५ – प्रहरीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यामा संलग्न व्यक्तिको हुलियाको स्केच सार्वजनिक गरेको छ । बमको हत्यामा नेवार वा मंगोल समूदायको जस्तो देखिने अन्दाजी २७/ २८ वर्षको व्यक्ति संलग्न भएको प्रहरीले बताएको छ । जेठ १८ गते कार्यालय जाँदै गर्दा हतियारधारीको गोली प्रहारबाट न्यायाधीश बमको निधन भएको थियो । प्रहरीका अनुसार हत्यारा गोलो अनुहार, कालो वर्ण, पालतो दाह्री पालेको, आर्मीपुलिसको जस्तो छोटो कपाल भएको र खाइलाग्दो जिउडाल भएको छ । ५ फिट ६ इन्च उचाइ भएको उक्त ...
नक्कली छाप दस्तखत कीर्ते गर्ने १ पक्राउ
ललितपुर, जेठ २५ - प्रहरीले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्ने एक जनालाई ललितपुरको ग्वार्कोमा पक्रेको छ । सिन्धुपालचोक बाह्रबीसे घर भई ललितपुर ग्वार्कोमा डेरा गरी बस्ने वर्ष ३० को दिनेश अर्याल लाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी कार्यालय नजिकै प्रेसर कुकर बम
हेमराज शर्मा उज्यालो । दाङ, जेठ २५ – अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तिको कार्यालय नजिक प्रेसर कुकर बम फेला परेको छ । दाङ तुलसीपुरको मावि सेन्टर स्कुल पछाडी जमिनमुनि गाडिएको प्रेसर कुकर बम सेना र प्रहरी सहितको टोलीले निस्क्रिय पारेको छ ।
घरेलु मदिरा बनाउने सामान सहित १३ जना पक्राउ
गोविन्द शर्मा/ उज्यालो । नेपालगञ्ज, जेठ २५ – प्रहरीले नेपालगन्जबाट ठुलो परिमाणको घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने सामानसहित १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जको टोलीले नेपालगन्ज नगरपालिकाको धम्बोझी तथा तेजनगर क्षेत्रमा बिहीबार छापा मारेर ठुलो परिमाणको घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने सामान बरामद गरेको हो ।
कालीकोटमा भेटिएको बम निष्कृय
कालिकोट, जेठ २५ - कालीकोट सदरमुकाम मान्ममा भेटिएको बम नेपाली सेनाले निष्क्रय पारेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकै वुधवार भेटिएको बम नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलीले विहीवार निष्कृय पारेको हो । बम द्वन्द्वकालमा राखिएको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।